युक्रेन-रुस युद्ध : बोरोदियाङ्काको क्षति बुचा सहरमा भन्दा निकै धेरै भयानक – SaipalNews.com
युक्रेन-रुस युद्ध : बोरोदियाङ्काको क्षति बुचा सहरमा भन्दा निकै धेरै भयानक
काठमाडौं २५ चैत । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले फेसबुकमार्फत गरेको पछिल्लो सम्बोधनका क्रममा बोरोदियाङ्का सहरमा भएको क्षति नजिकैको अर्को सहर बुचा भन्दा निकै धेरै भयानक रहेको बताएका छन्।
उनले ध्वस्त सहरमा सेना परिचालन गरिसकिएको जानकारी दिए। बिहीवार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा राजधानी किएभबाट बोल्दै उनले भने, रुसी सेनाबाट पीडित भएका झन् धेरै मानिस त्यहाँ छन्।
युक्रेनकी मुख्य अभियोजनकर्ताका अनुसार बोरोदियाङ्कामा ध्वस्त भएको एक अपार्टमेन्टमा २६ वटा शव फेला परेका छन्। युद्ध अन्त्यका लागि पुटिनले के चाहेका छन् ? सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा पोस्ट गर्दै इरीना भेनेडिक्टोभाले मस्कोमाथि जानाजान सर्वसाधारणहरू बसोबास गर्ने क्षेत्रलाई निसाना बनाएको आरोप लगाइन्।
उनका अनुसार आक्रमण भएको क्षेत्रमा सैन्य पूर्वाधार छैन । रुसी सेनालेसाँझको बेला आवासीय भवनहरूमा आक्रमण गरेका थिए जति बेला तुलनात्मक रूपमा धेरै मानिस घरमा हुन्छन्,भेनेडिक्टोभाले भनिन्।
बुचामा के भएको थियो ?
हालसालै जेलेन्स्कीले रुसी सेनाहरू माथि बुचा सहर नियन्त्रणमा लिएका बेला ु३०० भन्दा बढी सर्वसाधारणलाई मारेको र यातना दिएकोु आरोप लगाएका थिए। युक्रेनी राष्ट्रपतिले उक्त सहर रुसी सेनाले नियन्त्रणमा लिएका बेला गरेका कार्यहरूको अनुसन्धान हालसालै सुरु गरिएको जानकारी दिए।
उनले हाल आफूहरूसँग बुचामा मात्रै ३०० भन्दा बढीलाई मारिएको र यातना दिइएको सूचना रहेकोु बताउँदै पुरै सहरमा अनुसन्धान गरिँदा पीडितहरूको सङ्ख्या अझ ठूलो हुनसक्ने बताएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनबाट प्राप्त पछिल्लो विवरणबारे टिप्पणी गर्दै रुसको निन्दा गरेका छन्। बीबीसी
दश किलो अवैध सुनसहित दुई पक्राउ
बालिका बलात्कार गर्नेबिरुद्ध मृत्युदण्डको सजाय हुनेगरी कानून बनाउन कार्यदल गठन
नेकपा भित्र आन्तरिक भेटघाट तीब्र, परिणाम शून्य
मासुको उत्पादनदेखि भान्सासम्म अनुगमन, काम पनि कि कुरा मात्रै ?
विश्वासको मत दिने सबैलाई धन्यवाद दिने कांग्रेसको निर्णय
निर्मलाको नाममा न्यायको बलात्कार: डिएनए टेस्ट प्रहरीकै प्रयोगशालामा
भदौ २३ गते हुने संसद अधिवेशनमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षको यस्ते छ तयारी ?